नेपालमा चार प्रतिशत बाथरोगी, कसरी लाग्छ यो रोग ?
काठमाडौँ, २६ असोज । नेपालमा चार प्रतिशत बाथ रोगी रहेको एक तथ्यांकले देखाएको छ । विश्व बाथरोग दिवसको अवसर पारेर नर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालले आइतबार गरेको चेतनामूलक साइकल र्‍यालीमा यो जानकारी दिइएको हो । बाथरोग विशेषज्ञ...
मोबाइलको निहुँमा भान्जाको कुटाइबाट मामाको मृत्यु
मेलम्ची, २६ असोज । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सिन्धुकोट गाविस वडा नं। ४ बस्ने गोपालबहादुर सार्कीको आफ्नै पुफुको छोराको कुटपिटबाट मृत्यु भएको छ । असोज १९ गते आफ्नो भाइ कुमारबहादुर सार्कीको मोबाइल लिएर हिँडेको निहुँमा सोही...
काठमाडौं, २६ असोज । बिहे गरेको ५ वर्षसम्म सन्तान नभएपछि झारफुक गर्न पुगेकी एक महिलालाई झुक्याएर बलात्कार गरेको आरोपमा डाँगीहाट ४ का धामी धनबहादुर श्रेष्ठ पक्राउ परेका छन् । श्रेष्ठमाथि उपचारका लागि आएकी महिलालार्य...
पूर्वयुवराज पारसलाई मुद्दा
काठमाडौं, २६ असोज । पटक पटक अवैध लागू औषध कारोबारमा पक्राउ पर्दे छुट्दै आएका पूर्वयुवराज पारस शाहलाई थाइ प्रहरीले लागू औषध कारोबारकै रुपमा मुद्दा चलाउने भएको छ । थाइल्याण्डस्थित नेपाली दूताबासलाई जानकारी गराएर थाई...
नेपालीले पत्ता लगाए नयाँ तथ्य
काठमाडौं, २६ असोज । ब्रह्माण्डको चारैतिर फैलिएर रहेको अदृश्य पिण्ड डाकम्याटर बारे नेपाली खगोलशात्रीले नयाँ तथ्य फेला पारेका छन् । अस्ट्रेलियामा अनुसन्धानरत डाक्टर प्रज्वल काफ्ले आकाशगंगा मिल्की वे मा रहेको डार्कम्याटरको तौल यसअघि मानिएको...
पच्चीस हजार स्थायी शिक्षक नियुक्त गरिने
काठमाडौं, २६ असोज । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा २५ हजार स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्न कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । लामो समयदेखि अस्थायी शिक्षकको संख्या बढी भएको र रिक्त स्थानमा नियुक्ती गर्न एकै पटक २५...
ललितपुर, २६ असोज । काठमाडौं र तराई जोड्ने दु्रत मार्ग (फास्टट्रयाक) निर्माणकार्य अलपत्रमा परेको छ । काठमाडौं–तराई दु्रत मार्ग आयोजनाले पठाएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी सिफारिसपत्र गाविसमा थन्किएपछि आयोजनामा ढिलाइ हुने देखिएको हो । सरकारले...
काठमाडौँ, २५ असोज । बाराको हरिहरपुरमा स्थानीयवासीले शनिबार सशस्त्र प्रहरीको गाडीमा ढुङ्गामुढा गरी तोडफोड गरेपछि सशस्त्र प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन अश्रुग्यास, ग्यास ग्रिनेट र हवाई फायर गर्ने क्रममा हरिहरपुर–४ बस्ने ३५ वर्षीय जयनारायण पटेलको...
काठमाडौँ, २५ असोज । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मुलुक र जननीप्रति आफ्नो पनि जिम्मेवारी भएको महसुस गर्दै लगानीका लागि गैरआवासीय नेपालीलाई आग्रह गर्नुभएको छ । गैरआवासीय नेपाली दिवसको अवसरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले मुलुकमा...
सिद्धराज भट्ट धनगढी, २५ असोज । बस चलाउनै नमिल्ने बिग्रेको कच्ची सडकमा लापरवाही गर्दै क्षमताभन्दा दोब्बर बढी सङ्ख्यामा यात्रु राखेर किन बस चलाउनुपरेको होला ? डोटीमा गत सोमबार भएको कहालीलाग्दो बस दुर्घटनापछि यतिबेला यस क्षेत्रका...
राजविराज, २५ असोज । राजविराजबाट प्रकाशित हुने न्यूज टुडे दैनिकका पत्रकार श्यामसुन्दर यादवलाई कुटपिट एवम् दुव्र्यवहार गर्ने प्रहरीलाई कारबाही गर्ने स्थानीय प्रशासन र पत्रकारबीच सहमति भएको छ । सहमति भएपछि राजविराजका पत्रकारले आफ्नो आन्दोलन...
राष्ट्रपतिलाई जथाभावी नवोल्न एमाओवादी नेताको चेतावनी
काठमाडौँ, २५ असोज । एमाओवादीका प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई जथाभावी नवोल्न चेतावनी दिनुभएको छ । शनिबार पार्टी मुख्यालयमा आयोजित नियमित पत्रकार भेटघाटमा उहाँले यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो । ‘संवैधानिक जिम्मेवारीमा बसेको...
« 1 … 5,925 5,926 5,927 5,928 5,929 … 6,283 »